Ogaden News Agency (ONA) – Wareysi Hogaanka arimaha dibada Cabdiraxman maaday uu siiyey ILAYSTV
Wareysi Hogaanka arimaha dibada Cabdiraxman maaday uu siiyey ILAYSTV
Hogaanka Arrimaha Dibada ONLF mudane Cabdi raxmaan mahdi ayaa waxa uu siiyay waraysi Barnaamijka Ilays. Wareysigaas oo Hoggaanku kaga hadlay Xaalada cafimaad ay kusuganyihiin shaqalaha WFP ayaa waxa uu ku sheegay in shaqalaha WFP ay caafimaadkoodu aad u sareeyo cunno wanaagsan iyo caano Geel lasiiyay sida ugu dhaqso badana ay ula kulmi doonaan qoysaskodi. Waxa aan ku howlanahay sidii aan ugu wareejin lahayn qaramada midobay iyaga oo nabad ah.
Hogaanka ayaa wareysigaas ku sheegay in shaqalaha WFP ay kasoo furteen xabsi ku yaala xerada weyn ee lagu tababaro Hawayarinta. Xeradaas oo ku taala Galaalshe waxa kusugnaa ayuu yiri ciidan Ethiopian ah iyo hawaarin gaaraya 700. waxa halkaas aan ku dilnay illaa 300 askari oo kamid ah. waxana noo suurto gashay inaan xerada iyo magalada Galaalsheba Gacanta ku qabano. isaga oo hadalkiisa si wata ayaa waxa uu yiri waxa halkaas aan ka furanay hub aad u culus iyo maaliyad kaleba. Waxana xabsiga ku aragnay dad shacab ah oo garbo duub u xiran kuwo xoog lagu tababaro iyo maxaabiis kaleba oo ay kamid yihiin shaqalaha WFP. Dadkaas oo dhamaan kasii deynay xabsiga.
Cabdiraxmaan maaday ayaa waxa kale oo wax laga weydiiyay aragtida Caalamku ka heysto qadiyada Ogadeniya waxa uuna ku jawaabay in waqti aad u dhow miiska caalamka lagu gorfeyn doono sidii ay u gaari lahaayeen aayo ka tashi shacabka somalida Ogadeniya. isaga oo sheegay in hada ay jiraan wada tashiyo laga sameyay heer baarlamaanka Europe iyo Midka Mareykankaba gaarsiisan.
Wareysigan ayaa waxa kale oo lagu su’alay xiriirka u dhaxeeya ONLF iyo Eritrea waxa uu ku dhisanyahay iyo in xiriirkaas saameyn ku keensan karo siyaasada mustaqbalka ee ururka. Arintaas oo uu si faah faahsan oo kulul uu uga jawaabay.
Gudoonka Arimaha Dibada ee ONLF waxa kale oo uu ka hadlay xidhidho badan oo ka imanaya Ethiopia oo sheegaya in Ethiopia rabto heshiis ay la gasho ONLF. isaga oo cadeyay inaysan jirin wax wada hadal ah oo u socda Ethiopia iyo ONLF. Balse ay hadiyo jeer diyaar Ururka ONLF u yahay wada hadal.
Hadaba wareysigan oo faah faahsan waxa aad ka daawata www.ilaystv.com
khayr allaah ha siiyo hogaanka diblamaasiyadda JWXO N/hure C/raxmaan.
reer ilaystv.com guulaysta, sii giijiya.